42 Mẫu Sen Đá Đẹp Được Ưa Chuộng Nhất 2021 Và Cách Chăm Sóc | Hatgiongtihon.net - trung tâm cung cấp hạt giống tí hơn
42 Mẫu Sen Đá Đẹp Được Ưa Chuộng Nhất 2021 Và Cách Chăm Sóc | Hatgiongtihon.net
Đang Đọc: 42 Mẫu Sen Đá Đẹp Được Ưa Chuộng Nhất 2021 Và Cách Chăm Sóc | Hatgiongtihon.net in Hatgiongtihon.net
Indlela yokukhulisa i-succulents kwabo baqala ukudlala lo mthi. Zeziphi iintlobo ze-succulents, ingaba zinemilo entle? Lo ngumbuzo obuzwa ngabantu abaninzi.
Iintlobo ezidumileyo ze-succulents ekulula ukuzinyamekela
Iminyaka eyadlulayo kudala ilitye lelotus ibe sisityalo esithandwayo sokuhombisa; Zibonisa iintyatyambo ezipakishweyo ezifana neentyatyambo zelotus. Ilitye lelotus Inzalelwane yaseMelika, iAfrika kwaye iya ithandwa kakhulu kwihlabathi liphela. Esi sisityalo esineentlobo ezininzi ezahlukeneyo kwaye indlela yokuzinyamekela ayikhethi kakhulu okanye intsonkothile.
Iintlobo ze-succulents ekulula ukuzinyamekela
Ilitye lelotus ilungele ukukhula njengesityalo esisembizeni; isetyenziswe njengokuhlobisa okanye ukuhlobisa kwangaphakathi. Kunye Hanoi Bonsai Funda ngakumbi malunga neentlobo ze-succulents ekulula ukuzinyamekela kunye neengxaki eziqhelekileyo xa ukhula kwaye unyamekela ezi ntlobo ze-succulents!
I-lotus yamatye ekulula ukuyikhulisa kwaye kulula ukuyikhathalela
1 Iintlobo ezingama-42 ze-succulents ekulula ukuzikhathalela kwaye zithandwa kakhulu
2 Indlela yokukhulisa i-succulents xa usandula ukuyithenga
2.1 Ukuxuba umhlaba wokukhulisa i-succulents
2.2 Ukukhetha imbiza ukutyala isityalo esimnandi
2.3 Ukutshintsha iimbiza ze-succulents
2.4 Nkcenkceshela izityalo
2.5 Ukuhlamba ilanga kwi-succulents
2.6 Indawo yokubeka i-lotus yamatye ifanelekile
2.7 Ukuzalanisa i-succulents
3 Iingxaki eziqhelekileyo kwi-lotus yamatye
3.1 Amagqabi atyheli emthini
3.2 Ilotus yelitye inamanzi
3.3 Ukutshiswa lilanga kwilotus yamatye
3.4 Izityalo zihlaselwe ngumngundo kunye neentwala
Iintlobo ezingama-42 ze-succulents ekulula ukuzikhathalela kwaye zithandwa kakhulu
Indlela yokukhulisa i-succulents xa usandula ukuyithenga
Xa utyala kunye nokunyamekela i-succulents, ukuxuba umhlaba ngumcimbi wokuqala kunye nobalulekileyo; Eli linyathelo elimisela ukuba i-succulent iya kukhula kakuhle okanye hayi. Xa uthenga izityalo ezinencindi kwiivenkile zebhonsai okanye kwiivenkile ezinkulu, uninzi lwezityalo zifumaneka kwiivass okanye ezimbizeni. Ezi zityalo zidla ngokuba nomxube womhlaba ofumileyo ngokufanelekileyo kunye notyekelo lokubamba amanzi amaninzi.
Indlela yokukhulisa i-succulents
Kuba ezi ntlobo ze-succulents zikhuliswa kakhulu kwi-Da Lat. Isimo sezulu saseDa Lat siyabanda kwaye somile, ngoko ke kunyanzelekile ukuba umhlaba wokutyala imithi kufuneka ugcine ukufuma okuhle ukuze izityalo ezitsha zikhule kwaye zikhule kakuhle. Kodwa xa ubuyela kwiindawo ezifana neHanoi okanye iHo Chi Minh City. EHo Chi Minh, imozulu yahlukile. Ngoko ke, into yokuqala emva kokuthenga ukuxuba umxube womhlaba ngokufanelekileyo. Okanye ungasebenzisa kwakhona imidiya ekhulayo exutywe ngaphambili yee-succulents kunye ne-cactus ezifana Umhlaba Mix media ezivenkileni.
Iintlobo ze-succulents ekulula ukuzikhulisa kunye nokunyamekela
Ukuxuba umhlaba wokukhulisa i-succulents
Umxube womhlaba wokukhulisa i-succulents efanelekileyo kwiindawo ezishushu nezifumileyo njengeHanoi ubandakanya amacandelo ama-3 kwaye unomlinganiselo ulandelayo: Imixube emi-4 ye-rice husk ash: 4 pumice stones: 2 perlite stones. La macandelo anokuthengwa kwiivenkile ze-hardware.
Ukongeza, ungasebenzisa umxube we-rice husk ash kunye ne-honeycomb ash (utyumze kwaye uhlambe). Lo mxube une-porous kunye ne-airy, xa unkcenkceshelwa, uya koma ngokukhawuleza kwaye uvuselele ukuhluma kwezityalo. Emva kokuxuba ngokucokisekileyo umxube womhlaba; bamba ngokuqinileyo ukuba umxube awubambeki kunye ngoko umgangatho.
Umhlaba wokukhulisa izityalo zelotus
Ukukhetha imbiza ukutyala isityalo esimnandi
Khetha imbiza enencindi enobungakanani obufanelekileyo bomthi; Oku kunceda umthi ukhule ngcono, ubuhle buphezulu. Xa isityalo sikhulu, ungasidlulisela embizeni enkulu ngokuxhomekeke kwiimfuno zakho. Kucetyiswa ukuba utyale i-succulents kwiimbiza ze-terracotta ngenxa yeenzuzo ezininzi: ukukwazi ukufunxa amanzi ebusweni bebhodwe ukunceda umhlaba ebhodweni lome ngokukhawuleza.
Ukukhetha imbiza yelotus yelitye elifanelekileyo
Ukutshintsha iimbiza ze-succulents
Sebenzisa isandla sakho ukuze uthabathe ngobunono i-succulent ngaphandle kwembiza endala kwaye uyicinezele ngobumnene ngesandla sakho ukuze ususe umhlaba omdala, ugweme ukuchaphazela iingcambu. Kwakhona susa naziphi na iingcambu ezityumkileyo okanye ezonakeleyo. Emva koko ubeke umhlaba omtsha endaweni yomthi. Nikelani ingqalelo ekhethekileyo xa repotting isityalo, kufuneka sibeke isityalo nje ngaphezu komlomo imbiza, musa ukutyala phantsi kakhulu ngaphantsi okanye phezulu kakhulu phezulu.
Ukukhula kwe-succulents kwiimbiza ze-terracotta
Emva kokubuyisela, sebenzisa umaleko womkhenkce ngokulinganayo usasazwe phezu komphezulu wembiza. Oku kuya kuthintela ukukhukuliseka komhlaba xa kunkcenkceshelwa kwaye kuzise ixabiso eliphezulu lobuhle.
Phinda ufake isityalo esinencindi
Ngosuku lokuqala lokubuyisela, musa ukunkcenkceshela kwaye ubonise isityalo elangeni. Into ekufuneka uyenzile kukugcina isityalo kwindawo epholileyo nengena umoya. Ngosuku olulandelayo qhubeka unkcenkceshela izityalo. Kuyimfuneko ukunkcenkceshela kakhulu kwisiseko, kungekhona kumagqabi. Malunga neentsuku ezi-2-3, nkcenkceshela isityalo kube kanye ukuba ushiya imbiza kwindawo engena umoya nelanga. Khumbula ukuba amanzi ome ngokupheleleyo phambi kokunkcenkceshela okulandelayo.
Indlela yokunyamekela ngokufanelekileyo i-succulents
Kuyimfuneko ukubonelela ngesixa esaneleyo samanzi kwisityalo; Ukuba ayiphelelwa ngamanzi emzimbeni, ayisayi kukhula. Ukuba umthi unamanzi kakhulu, buyisela umhlaba omtsha olungele umthi. Ukuba imbiza yakho inomngxuma wokukhupha amanzi, manzisa isityalo kakhulu ukuze ugweme ukuxhalaba malunga nesityalo sifutshane namanzi.
Iimfuno zamanzi ze-succulents
Ukuhlamba ilanga kwi-succulents
Emva kweentsuku ezi-2 zokutyala, isityalo sinokubekwa elangeni; malunga neeyure ezingama-1-2 ukuba izityalo zizinzile kuqala; ngoko ngokuthe ngcembe wandise iiyure zokukhanya kwelanga. Kucetyiswa ukuba yome phambi kwentsimbi yesi-9 kusasa okanye emva kwentsimbi yesi-3 emva kwemini. Kumsitho wokuqala; Ezinye iintlobo ze-succulents ziya kuba ne-phenomenon yokufumana kunye namagqabi kunye nokuwa. Nangona kunjalo, ukuba usenayo le meko kwiveki ezayo, mhlawumbi kungenxa yokuba awuyinyamekanga kakuhle.
Ukutshisa ilanga kwi-succulents yonke imihla
Emva kweveki e-1, isityalo siya kuzinza, kufuneka unikeze ukukhanya kwelanga okwaneleyo kwiiyure ezingama-3-4 ngosuku kwisityalo. Xa sifumana ukukhanya okwaneleyo kwelanga, isityalo siya kukhula kakuhle kakhulu kwaye sibe nombala omhle.
Indawo yokubeka i-lotus yamatye ifanelekile
Beka ilitye lelotus kwindawo enempepho yokuphefumla kakuhle, ekwaziyo ukubamba ilanga lasekuseni.
Indawo yesityalo se-succulent ifanelekile
Ngokuqhelekileyo i-succulents isasazwa ngokusikwa. Yenza oku kulandelayo:
Sika amagqabi kunye namasebe omthi wokuqala. Nika ingqalelo ekukhetheni iindawo ezikhulileyo, ezisempilweni, ezingenazinambuzane
Emva kokuvuna amagqabi kunye namasebe, vumela ukusikwa kome malunga nosuku olu-1
Sika amagqabi, uveze isiseko malunga ne-1-2cm ukwenza kube lula ukuplaga embizeni entsha.
Xuba umhlaba wembiza njengoko ungentla kwaye utyale amasebe avuniweyo embizeni nganye nganye. Qaphela amagqabi, beka ngobunono amagqabi emhlabeni ukuze utyale, ungangcwabi emhlabeni
Nkcenkceshela isityalo, sigcine kwindawo engena umoya
Emva kokunkcenkceshela, beka isityalo kwindawo enelanga malunga neeyure ezi-2 / ngosuku.
Amanzi kwakhona xa umhlaba womile, emva kwenyanga eyi-1 kuya kubakho iziphumo
Indlela yokusasaza izityalo ezinencindi
Iingxaki eziqhelekileyo kwi-lotus yamatye
Ilitye lelotus Sisityalo esomeleleyo esinezinambuzane kunye nezifo ezimbalwa. Nangona kunjalo, xa ikhulile njengesityalo sokuhlobisa kwiindawo ezineemeko zokunakekelwa okungafanelekanga, izifo ziya kubonakala ezinokubangela ukufa komthi. Nazi ezinye iingxaki zemithi eziqhelekileyo.
Ezinye iingxaki eziqhelekileyo kwizityalo ezinencindi
Amagqabi atyheli emthini
Amagqabi atyheli awasoloko eluphawu lwezityalo ezigulayo. Ngokomthetho wendalo, amagqabi amancinci akhula, amagqabi amadala ajika aphuzi kwaye afe. Le yinto eqhelekileyo. Siya kususa amagqabi amadala ezityalo ezikhula kumgangatho ophantsi. Ukongeza, izityalo ezothuswa bubushushu ziya kuba tyheli kwaye zityebe. Beka nje isityalo emthunzini kwaye utshintshe ubushushu kancinci; Isityalo selotus siyachacha.
Indlela yokunyamekela izityalo ezinencindi enamagqabi atyheli
Ilotus yelitye inamanzi
Ilotus yelitye inamanzi kungenxa yezizathu ezifana nokunkcenkceshela kakhulu; Imbiza ayikhutshelwanga kakuhle okanye umhlaba awutshintshwanga kakuhle…. Kuyimfuneko ukuqaphela izityalo ezinamanzi xa iimpawu zokuqala zokungena kwamanzi zibonakala ziphatha ngokukhawuleza. Ukuba amanzi amaninzi, isityalo siya kufa.
Ukuqaphela iimpawu: Amagqabi kunye neziqu zijika zibe tyheli, zibe mnyama, zibonakale ngenxa yamanzi amaninzi, umthi uba buthathaka kwaye ubuthathaka. Iingcambu ezimnyama, ezingakhuli iingcambu ezintsha.
Unyango: Yahlula kwaye unqumle naziphi na iindawo ezibolileyo. Emva koko yiyeke yome kangangeentsuku ezingama-2-3 kwindawo epholileyo kwaye uphinde utyale
Indlela yokunyamekela i-succulents enamanzi
Ukutshiswa lilanga kwilotus yamatye
Esi siganeko sikholisa ukwenzeka xa isityalo sichanabeke kwilanga elithe ngqo emini emaqanda ixesha elide.
Ukuqaphela iimpawu: Uyakwazi ukuqaphela imiphetho yamagqabi yoma kwaye ijike ibemnyama ngathi itshisiwe
Unyango: Hambisa nje isityalo kwindawo enokukhanya kwelanga emva kwexesha ukuze isityalo sifumane amagqabi amatsha endaweni yawo onke amagqabi atshileyo.
Indlela yokunyamekela isityalo se-succulent esitshiswe lilanga
Izityalo zihlaselwe ngumngundo kunye neentwala
Ilotus yelitye ihlaselwa ngundo kunye nentwala kuyingozi kakhulu. Le nto inokwenzeka kakhulu ukuba yenzeke ngexesha lokutshintsha kwexesha lonyaka. Eyona nto iyingozi kakhulu kukuhlaselwa yi-white mealybugs.
Ukuqaphela iimpawu: Amagqabi emazantsi omthi aya kuwa okanye ahlukane ngokulula nesiqu. Isiqu sibolile; ukubonakala kwamabala amhlophe (umngundo)
Uthintelo: Izityalo kufuneka zityalwe kwindawo engenambovane. Inokutshizwa ngemichiza yokungunda kunye neentwala.
Xa isityalo sibonakala sigula, susa ngokukhawuleza onke amaqabunga asezantsi kwaye unqumle i-fungus. Emva koko, shiya isityalo emthunzini malunga neentsuku ezi-3 ukuze usike siphole. Okulandelayo, ukutyalwa ngokutsha kuya kwenziwa ukuze kugcinwe umthi.
Indlela yokunyamekela i-succulents xa yosulelwe yi-fungus?
Ngentla ziindidi ze-succulents ekulula ukuzikhathalela; njengoko indlela yokukhulisa i-succulents eneenkcukacha kakhulu Hanoi Bonsai ithunyelwe ngereferensi yakho. Ndiyathemba ukuba ungakhetha iintlobo ze-succulents ekulula ukuzinyamekela; nqwenelela impumelelo!.
Top 12 Loài Sen đá đẹp đốt Tim Mọi Người | Hatgiongtihon.net
Cách chăm sóc, giá bán & địa chỉ mua | Hatgiongtihon.net